ओसाका प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
डन्जिरी महोत्सव किशीवाडा, ओसाका = शटरस्टक
ओसाका प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
ओसाकाको कुरा गर्ने हो भने यो ओसाका शहरको डोटनबोरीमा चम्पी नियोन साइनबोर्डका लागि प्रख्यात छ। ओसाका मा एक शक्तिशाली मान्छे को संस्कृति छ। त्यो ओसाकामा मात्र नभएर समग्र ओसाका प्रान्तमा पनि भन्न सकिन्छ। किन तपाई ओसाका राम्ररी मन पराउनुहुन्न?
ओसाका प्रान्तको रूपरेखा
कुरोमोन ईचिबा एक विशाल बजार हो विक्रेताहरूसँग सडक फूड, ताजा उत्पादन र शेलफिश, साथै स्मारिका, ओसाका = शटरस्टक बेच्ने विक्रेताहरू
ओसाका प्रान्तको नक्शा
"ओसाका टोकियो भन्दा बढी रमाइलो शहर हो।" ओसाकाको लोकप्रियता हालै विदेशबाट आएका पर्यटकहरूको बीचमा बढेको छ। ओसाका पश्चिमी जापानको मध्य शहर हो। ओसाका वाणिज्य द्वारा विकसित गरिएको छ, जबकि टोकियो समुराई द्वारा निर्मित शहर हो। त्यसो भए, ओसाकाको लोकप्रिय वातावरण छ। डाउनटाउन क्षेत्र ...
ओसाका प्रान्त पश्चिमी जापानको केन्द्र हो। यसको जनसंख्या लगभग 8.8.। मिलियन छ, जुन जापानको टोकियो र कानगावा प्रान्तको छेउमा छ।
ओसाका प्रान्त क्योटो प्रान्तको पश्चिम तर्फ र समुन्द्रको अनुहार नारा प्रान्तको नजिकै छ। तसर्थ, यो प्राचीन कालदेखि क्योटो र नारा पूरक शहरको रूपमा विकसित भएको छ। ओसाका प्रान्तले सागरको सामना गरिसकेकोले यो विशेष गरी व्यापारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
ओसाकाको प्रमुख विशेषता यो हो कि धेरै प्रभावशाली व्यापारीहरू प्राचीन कालदेखि नै बसोबास गरिरहेका छन् र जापानको अर्थव्यवस्थाको केन्द्रको रूपमा यस क्षेत्रको विकास गरेका छन्। इडो युगको अन्तिम चरणमा, टोकियो धेरै विकसित भयो र ओसाकालाई पार गर्ने शहरको रूपमा बढ्यो। आज, टोकियो एक विशाल ठूलो शहर भएको छ, तर ओसाकाका मानिसहरुमा टोकियोको बिरूद्धको बिरोध भावना छ। र ओसाकाका मानिसहरूले उनीहरूको जीवन संस्कृतिको कदर गर्दछन्।
यस ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको कारण, यदि तपाईं ओसाका जानुहुन्छ भने तपाईं टोकियोबाट केही फरक संस्कृतिको आनन्द लिनुहुनेछ। ओसाका शहरको केन्द्रमा, मूल संस्कृति दक्षिणी शहरहरुमा जस्तै Dotonbori मा मजबूत छ। मैले माथिको लेखमा प्रस्तुत गरेको छु। त्यसोभए, यदि तपाईं आपत्ति राख्नुहुन्न भने, कृपया यस लेखमा पनि छोड्नुहोस्।
र यो ओसाकाको दक्षिणी भागमा रहेका सहरहरू हुन् जुन ओसाका उपनगर बाहिर मूल संस्कृति बलियो रहन्छ। यदि तपाईं ओसाकाको दक्षिणी भागमा अवस्थित कन्साइ एयरपोर्ट प्रयोग गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने कन्साइ एयरपोर्ट नजिकैका शहरहरू रोक्नु रोचक हुनेछ।
ओसाका, जापानको किशिवाडा वार्डमा लिइएको वार्षिक डन्जीरी उत्सव। यस घटनामा, विशाल काठको फ्लोटहरू पुरुष सहभागीहरूको टोलीले बोक्छन् र टोलीहरू = शटरस्टक बीच रेसिड हुन्छन्
फोटोहरू: किशिवाडा डन्जिरी महोत्सव
ओसाकाको दक्षिणी भागमा रहेको किशिवाडा शहरमा, हरेक सेप्टेम्बरको मध्यमा धेरै साहसी "डन्जिरि महोत्सव" आयोजना गरिन्छ। यस चाडमा, स्थानीय पुरुषहरूले दन्जिरि (फ्लोट्स) को धेरै तानेर शहरको परेड गर्छन्। किशिवडाका धेरै मानिसहरू दन्जीरी चाड उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने सोच्दछन्। ...
किशीवाडा शहर ओसाका प्रान्तको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ। यो Kansai एयरपोर्ट स्टेशन बाट Nankai रेलवे द्वारा लगभग 20 मिनेट छ। मलाई लाग्छ कि ओसाकाको पुरानो जीवन संस्कृति किशिवडामा रहन्छ। तपाईं किन किशीवाडामा खस्नुहुन्न यदि तपाईं कन्साइ एयरपोर्टमा पुग्नुहुन्छ वा कन्साइ एयरपोर्टबाट फर्कनुहुन्छ?
किशिवडा हरेक वर्ष सेप्टेम्बरको मध्यमा "किशिवाडा डन्जिरी महोत्सव" को लागी प्रख्यात छ। धेरै जसो किशिवाडामा बस्ने मानिसहरूले यस चाडको बारेमा धेरै हेरचाह गर्छन्। यस चाडमा धेरै पहिलेदेखि नै मानिसहरूले विशाल "डन्जीरी" कोर्दछन् र शहर भएर बग्दछन्। तिनीहरू यस चाडमा उनीहरूको साहस र एकताको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, सेप्टेम्बरमा किशिवाडामा यस उत्सवको भ्रमण गर्नुहोस्। अन्य समयमा तपाईले "दञ्जीरी" को वास्तविक कुरा र "किश्वाडा डन्जिरि कैकान (हल)" मा चाडपर्वहरूको छवि देख्न सक्नुहुन्छ।
मैले किशीवाडाको उत्सवको बारेमा जापानी चाडको परिचय लेखमा लेखेको थिएँ। यदि तपाईं आपत्ति गर्नुहुन्न भने, कृपया तलको लेखमा ड्रप गर्नुहोस्।
>> "किशिवडा डन्जिरि महोत्सव" को विवरणहरूको लागि कृपया यो लेख हेर्नुहोस्
नागासाकी प्रान्त: सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र केहि चीजहरू